‘सेना आउँदा सास फेर्न पाइयो’ : हावाहुरी पीडित - Sutra TV Sutra TV
‘सेना आउँदा सास फेर्न पाइयो’ : हावाहुरी पीडित
एक साताअघि कञ्चनपुर र कैलालीमा आएको हावाहुरीले यहाँका बस्तीहरुमा ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो । हावाहुरीका कारण सयौँ घरहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् भने कतिपय बस्तीहरुमा बिजुलीका पोलहरु भाचिँदा स्थानीयवासी अन्धकारमा दैनिकी काट्न विवश भएका छन् ।
कञ्चनपुरका हावाहुरीले सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा क्षति पु¥याएको तथ्याङ्क छ । हावाहुरीले पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएपछि त्यहाँका पीडितहरु अहिले पनि छिमेकी र खुल्ला आकाशमुनी रात बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । “राहतको नाममा यही एउटा त्रिपाल वडा कार्यालयबाट मिलेको छ”, ओडले भन्नुभयो, “घरभित्रको अन्न भिजेर काम नलाग्ने भएपछि किनेर खादैछौँ ।” उहाँले हावाहुरीपछि सेना बस्तीमा आउँदा गाउँलेहरुलाई निकै राहत पुगेको बताए ।
त्यसैगरी कृष्णपुर नगरपाकिला– ६ कै ३८ वर्षीय तिलक भट्ट दम्पतीसहित घरमा सहयोग गरिरहेको सेनाको टोलीसित काममा व्यस्त छन् । “घरको छाना उडाएर राति खाटमुनी पसेर चार जनाको परिवार बाच्यिौँ’, भट्टले भने, “अहिले सेना आएर छाना बनाउन सहयोग गर्दैछ ।”
उनले सेनाले उद्दार लगायतका काममा सहयोग गरेको सुनेपनि गाउँमै आएर घरका छाना बनाउनेदेखि अहिले दिएको हरेक समस्या समाधानमा खटिएको देख्दा गाउँले हर्षित भएको बताए । “स्थानीय तहबाट त्रिपाल दिएको भए पनि अन्य राहत अहिलेसम्म केही आएको छैन”, उनले भने, “खरीद गरेर ल्याएको ३० किलोग्राम चामलले परिवारको भोक टार्दैछु ।” हावाहुरीले वडा नं. ६ मा मात्रै ५० को हाराहारीमा बिजुलीका पोलहरु भाचिँएका छन् । भने रुखहरु ढल्दा सडकसमेत अवरुद्ध भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
“धन्न सेना आएर गाउँमा सडक खुलाएपछि आवतजावत गर्न सहज भएको छ”, स्थानीय रगि नगारीले भने, “क्षतिको विवरण सङ्कलनबाहेक राज्यबाट अरु केही सहयोग पाएको छैन ।” स्थानीयवासी गङ्गाराम भट्टले स्कूलको छाना भत्किदा विद्यालय बन्द हुनुका साथै खानेपानी र बिजुलीको समस्याले यहाँका बासिन्दा आक्रान्त बनेको उनले बताए । “जस्तापाता भएका घरहरु प्रायः सबैमा क्षति पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेनाबाहेक अन्य सरकारी निकायबाट केही सहयोग भएन ।”
भत्किएका छाना÷टहरा पुनःनिर्माण गर्न नेपाली सेनाको सिंहसाशूल गुल्मको टोली कृष्णपुर नगरपालिकामा खटिएको छ । गुल्मबाट उपसेनानी चेतन छत्कुलीको नेतृत्वमा खटिएको सैनिक टोली विगत तीन दिनदेखि गाउँमा खटिएको छ । हावाहुरीपछि जिल्लामा बसेको सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा सहयोगका लागि खटिएको बताइएको छ ।रासस
ज्ञानेन्द्र शाही हिरासतमै, प्रहरीले लगायो यस्तो मुद्दा(भिडियोसहित)
रामारोशन गाउँपालिकाका प्रमुख साउँदमाथि गोली प्रहार
बालुवाटारमा दुई घण्टा त्रिपक्षिय छलफल, के भयो ओली-प्रचण्ड र देउवाबीच कुराकानी ?
पानी ट्याङकीमा डुबेर भारतमा एक नेपालीको मृत्यु
अझैं छुटेनन् ज्ञानेन्द्र शाही, सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको डा. भण्डारीको आरोप
घुस लिएको अभियोगमा मालपोका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर
अफिस हिँडेकी किशोरीमाथि १० जनाको समूहले गर्‍यो सामूहिक बलात्कार
अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, हामी छिट्टै मारिन्छौँ
आँचलले पाएको सानो सानो खुशी
आज ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
गाउँपालिका अध्यक्षको परस्त्री प्रेमः अर्धनग्न तस्बिर सार्वजनिक भएपछि पुगे प्रहरी खोरमा
यसरी फेल भयो हत्याको योजना, मोटो रकम सुपारी लिएर भक्तपुर आएका थिए सुटर
विप्लव नेकपाको विद्यार्थी संगठनका मुगु इन्चार्ज पक्राउ